कृष्ण गिरी काठमाडौं, १० जेठ
२००७ सालको क्रान्तिको सुरुवात हुँदा म वनारस पढ्थेँ । त्यस समयमा देशमा राणा शासन थियो । देशमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि भारतको वनारसमा विद्यार्थीको सङ्गठन स्थापना भएको थियो । त्यस सङ्गठनको नाम थियो- नेपाल छात्र संघ ।
त्यस सङ्गठनमा भएका विद्यार्थीहरू र म सँगै पढ्थ्याँै । त्यस कारण मेरो सम्बन्ध तत्कालीन कांग्रेस निकटसँग भयो ।
त्यस समयमा राजनीति गर्नु ठूलो कुरा थियो । त्यही विद्यार्थी सङ्गठनका कारण म नेपाली कांग्रेससँग नजिक भएँ । त्यो समयमा भारतबाट नेपालमा हुने आन्दोलनमा भाग लिने भनेर नेपाल आउने कार्यक्रम थियो ।
हामी पनि वनारसबाट विहारको पटना आयौँ । पटना पुगेपछि नेपाली कांग्रेसका सदस्यबाहेकले आन्दोलनमा भाग लिन नपाउने भन्ने भयो । हामी भने फर्केनौँ तर अरू धेरै साथीहरू सङ्गठनको सदस्य नभएर फर्किए । म त्यो समयमा चवन्नी सदस्य थिएँ नेपाली कांग्रेसको ।
बीपीको व्यवहारले कांग्रेस छाडेँ
म कामविशेषले पटनामा थिएँ । पटनामा नेपालका केही युवाहरू वकालत गर्थे । मेरा दाजु विश्वमोहन मानन्धर पनि थिए । त्यस समय पटनामा सूर्यप्रसाद उपाध्यय पनि आउनुभएको रहेछ । बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, सुवर्णशम्सेर राणा र उपाध्याय नेपाली कांग्रेसका खम्बा थिए ।
उपाध्यायले मलाई रक्सौल गएर पत्र बीपीलाई दिन भन्नुभएको थियो । उपाध्यायले ‘यो पत्र अरूको हातमा नदिनू, आफैँ बीपीलाई दिनू’ भन्नुभयो । उपाध्यायले नै रक्सौलमा गभर्नर कन्भेन्सन हुँदै छ भन्नुभएको थियो । बीपी आउनुहुन्छ भन्नुभएको थियो ।
म पत्र बोकेर रक्सौल आएँ । मकार्यक्रम स्थलमा पुगेँ । मैले त्यहाँ भएका मानिसलाई भनेँ, ‘म सूर्यप्रसाद उपाध्यायको पत्र लिएर आएको छु, जुन पत्र बीपीलाई दिनुपर्नेछ ।’
तर, मेरो त्यो कुराको सुनवाइ नै भएन । मैले बीपी भेट्न ६ घण्टा कुर्नुपर्‍यो । ६ घण्टापछि भेटेँ । ममा त्यो समयसम्म बीपीप्रति पूरा नकारात्मक असर परिसकेको थियो ।
बीपीलाई पत्र बुझाएँ । बीपीले सोध्नुभयो, ‘केही भन्नु छ ?’ म ‘केही भन्नु छैन’ भनेर सरासर हिँडे । त्यस समयदेखि मेरो बीपी र कांग्रेससँग मोहभंग भयो । घर आएर कांग्रेस छाडेँ ।
बीपीसँग दोस्रो पटक दिल्लीमा भेट
बीपी कोइरालाको सरकार राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरे । बीपी जेल परे । उनी ८ वर्ष जेल बसेर निस्किएका थिए । उनी जेलबाट निस्किएपछि दिल्ली गएका थिए । भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी र भारतीय सोसलिस्ट पार्टीले सल्लाह गरेछन् कि नेपालका कम्युनिस्ट र कांग्रेसलाई मिलाउन पाए आन्दोलन सफतातर्फ जान्थ्यो । नेपालमा लोकतन्त्र आउँथ्यो । भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीले हामीलाई दिल्लीमा बोलायो । म र केशरजंग रायमाझी अनि बीपी र शैलजा आचार्यबीच दिल्ली कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यालयमा भेटघाट भयो । हामीले ३ वटा प्रस्ताव राख्यौँ ।
१. देशमा नै बसेर पञ्चायतको विरुद्ध आन्दोलन गरौँ ।
२. हतियार नउठाई आन्दोलन गरौँ ।
३. प्रजातन्त्र बुझ्ने मध्यम वर्गले हो, तल्लो वर्गका लागि केही कार्यक्रम लिएर जाऔँ ।
तर, बीपीले ३ वटै प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुभयो । उहाँले देशमा बसेर आन्दोलन गर्न सकिँदैन, राजाले हतियारबाहेक अरू केही भाषा बुझ्दैनन् । प्रजातन्त्रको साथमा अरू कार्यक्रमले मानिसको दिमाग ‘डाइभर्ट’ हुन्छ भनेर उठ्नुभयो ।
केही पर पुगेपछि पुनः फर्किनुभयो बीपी । यति बसेर छलफल गर्‍यौँ, केही समझदारी त गर्नुपर्‍यो भन्नुभयो । हामी आआफ्नो बाटो लाग्ने, कसैले कसैको अवरोध नगर्ने भन्ने कुरा पनि उठाउनुभयो । हामी त्यही भनेर छुट्टियौँ । त्यस दिनपछि धेरै पछिसम्म सँगै मिलेर आन्दोलन गर्ने कुरा भएन ।
महासचिव भएपछिको अर्को भेट
बीपी मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्किनुभएको थियो । उहाँ चाबहिलमा बस्नुहुन्थ्यो । म र केशरजंग रायमाझी बीपीलाई भेट्न गएका थियौँ । त्यसबेला नेकपाको महासचिव र रायमाझी अध्यक्ष थियौँ ।
त्यस भेटमा बीपीले दिल्लीमा भएको कुरा अब अगाडि बढाऔँ भन्नुभयो । यो कुरा २०३४ सालको हो । दिल्लीमा सँगै मिलेर आन्दोलन गरौँ भन्ने थियो । पहिला बीपीले दिल्लीमा भएको भेटघाटको कुरा कसैसँग नभन्नु भन्नुभएको थियो तर पछि आफैँले कुरा बाहिर ल्याउनुभयो । त्यस समयमा चाबहिलमा ५०-६० जना थिए । त्यसपछि यो कुरा गोप्य रहेन ।
मेरो सङ्गत र अनुभवमा बीपी लचिला हुनुहुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । उहाँ समयअनुसार चल्न जान्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । बीपीले प्रजातन्त्रको विषयमा कहिल्यै सम्झौता गर्नुभएन तर उहाँ राजासँग भने मिल्नुभयो ।
बीपीले ‘मेरो घाँटी राजासँग जोडिएको छ’ भन्नुभयो । यो उहाँले नेपालको सार्वभौमिकतासँग जोडेर भन्नुभएको थियो तर पछि यसको गलत अर्थ लगाइयो ।
बीपीले विराटनगरमा गरेको भाषणका कारण उहाँका वरिपरिका मानिसले भारत भाग्न भनेका थिए । उहाँ ८ वर्ष जेल बसेर पनि फेरि भारत भाग्नुभयो ।
सुवर्णशम्शेरले राजालाई सहयोग गर्ने बचनका कारण जेलबाट छुटेका हुन् भन्ने थियो तर वीपीका वरिपरिका मानिसले पुनः भारत भाग्न बाध्य बनाए ।
२०१५ सालको निर्वाचनले केन्द्रीय सदस्य
२०१५ सालमा आमचुनाव भयो । त्यस समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ४६ स्थानमा उम्मेदवार उठाएको थियो । म त्यसबेला कोसी-पश्चिम प्रान्तीय कमिटीको सदस्य र रौतहट जिल्लाको सचिव थिएँ । त्यस चुनावमा देशभरबाट कम्युनिस्टले ४ सिट जितेको थियो, जसमा २ सिट रौतहटबाट थिए ।
रौतहटबाट शेख फरमान र हरदयाल महतोले चुनाव जितेका थिए । त्यसपछि मलाई पार्टीले केन्द्रीय सदस्य बनायो ।
त्यसको केही समयमै २०१७ सालको ‘कू’ भयो । मैले खासै काम गर्न पाएको थिइनँ । कुनै जिम्मेवारी पनि पाएको थिइनँ ।
बीपीको सरकार ‘कू’ हुनुमा आन्तरिक लडाइँ
नेपाली कांग्रेसमा आन्तरिक लडाइँ व्याप्त थियो । पार्टीभित्र बीपी र मातृका कोइरालाबीच द्वन्द्व थियो । यसको फाइदा राजा महेन्द्रले उठाए । उहाँले नेपाली कांग्रेसलाई नै प्रयोग गरे । मातृकालाई आफ्नो पक्षमा पारेर बीपीलाई कमजोर बनाए ।
कांग्रेस कमजोर भएपछि राजालाई ‘कू’ गर्न सजिलो भयो । कांग्रेसमा विभाजन नआएको भए महेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई ‘कू’ गर्न सक्दैनथे । यसमा भारतको पनि सहयोग रह्यो महेन्द्रलाई किनकि जितेर आएपछि पनि बीपीलाई सजिलै प्रधानमन्त्री हुन दिइएन ।
बीपीले गरेका राम्रा काम
बीपी नेतृत्वको सरकारले २-३ वटा काम राम्रो गरेको थियो । विर्ता उन्मूलन र सगरमाथा नेपालमा ल्याउने काम बीपी नेतृत्वको सरकारका महत्त्वपूर्ण काम थिए । यी धेरै ऐतिहासिक काम गर्नुभएको थियो बीपीले । केही सुधारात्मक काम अरू पनि गर्नुभयो उहाँले ।
उहाँले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउनुभएन । उहाँले डेढ वर्ष मात्र काम गर्न पाउनुभयो । चुनावमा जितेर आएपछि पनि राजाले प्रधानमन्त्री हुन बोलाएनन् । उहाँको दरबार र भारतसँग ‘टसल’ भएको हो, त्यस समयमा ।
उहाँले जुन सोच राखेर सरकार चलाउन खोज्नुभएको थियो, त्यो काम गर्ने वातावरण पनि बनेन । उहाँले किसानका लागि सोच्नुभएको देखिन्छ । निम्न वर्गप्रति सचेत तरिकाले काम गर्न चाहनुहुन्थ्यो बीपी तर त्यो गर्न पाउनुभएन ।
उहाँले नेपालमा संसदीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्न खोज्नुभएको थियो । ‘कू’ले गर्दा संसदीय प्रणाली स्थापित हुन पाएन । उहाँले किसानका लागि गर्न खोजेको काम पूरा हुन पाएन ।
जग्गामा प्रगतिशील कर लगाउनुभयो, विर्ता उन्मूलन गर्नुभयो तर उहाँलाई डेढ वर्षमै ‘कू’ गरेर पञ्चायती व्यवस्था लादियो । २००७ सालमा क्रान्ति भयो तर कांग्रेसमा २००९ सालमा नै फुट भयो । कांग्रेसको मतभेद नै ‘कू’को पहिलो कारण हो ।
बीपी कम्युनिस्टसँग मिल्नुभएन
बीपी कहिल्यै पनि कम्युनिस्टसँग नजिक हुनुभएन । कार्यगत एकता गर्न पनि हच्किनुभयो । उसो त बीपी पहिला कम्युनिस्ट विचारसँग प्रभावित हुनुहुन्थ्यो तर पछि राममनोहर लोहियासँगको सङ्गतले कम्युनिस्टबाट विमुख बन्नुभयो । उहाँ प्रजातन्त्रवादी हुनुभयो ।
उहाँ कम्युनिस्टसँग आफैँ नजिक हुन चाहनुभएन । यो उहाँको विचारको कुरा हो । उहाँ प्रजातान्त्रिक विचारबाट प्रभावित हुनुभयो ।
कम्युनिस्टहरू पनि बीपीको आमसभा बिथोल्थे । कयौँ आमसभा नै बिथोलेका छन् बीपीका । सुरुदेखि नै बीपी र कम्युनिस्टहरू मिलेनन् । विराटनगरमा मजदुर आन्दोलन मिलेर गरेका हुन् बीपी, मनमोहन, गिरजाप्रसादले तर कयौँ कम्युनिस्टहरूलाई आफ्नो कब्जामा लिएर राखेका उदाहरण पनि छन् । कुटपिट गर्थे कांग्रेसले कम्युनिस्टलाई ।
बीपी कम्युनिस्टसँग नजिक हुने कुरा भएन, विचार नै नमिलेपछि । पुष्पलालले बीपीसँग भ्रष्टाचारका विरुद्ध मिलेर जाऔँ भन्ने प्रस्ताव राख्दा उहाँले स्वीकार्नुभएन । यो भनेको फरक विचारका कारण हो । बीपीले भन्नुभएको थियो, ‘कम्युनिस्टको नजरमा सबै कांग्रेस भ्रष्टाचारी । कांग्रेसको नजरमा कम्युनिस्ट फटाहा अनि कसरी हुन्छ मोर्चा ?’
(शिलापत्रकर्मी कृष्ण गिरीसँगको कुराकानीमा आधारित)
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ १०, २०७७, ०८:४४:००
नेकपा विवाद : कसले के पाए, के गुमाए